Famakiana ny fahombiazana | Reef Resilience
Ny fitantanana mahomby dia miankina amin'ny fandrefesana, ny fanombanana ary ny fampifanarahana. Sary © The Nature Conservancy
Ny fanambin'ny mpitantana ny haran-dranomasina dia tsy ny fanapahana hevitra ny paikady hampiharina amin'ny toe-javatra manokana, fa koa ny fanombanana na fandrefesana ny fahombiazan'ireo paikady ireo ary ny fampifanarahana azy ireo raha tsy tratra ny vokatra tadiavina. Fandrefesana ny fahombiazany ary Adaptive Management dia fototry ny fandrindrana sy ny fitantanana mahomby. Ny fandrefesana ny fahombiazan'ny hetsika fiarovana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso sy ny fanombanana dia afaka manome fototra ho an'ny lesona hianarana, famaritana paikady ho avy, sy ny fampandrosoana ny programa. Ohatra, raha te hanatratra ny harafesin'ny haran-dranomasina, ny tompon'andraikitra eo an-toerana dia tsy maintsy mamaritra ny halehiben'ny asa ataon'izy ireo ary afaka mamantatra ny antony mahomby sasantsasany rehefa tsy misy ny hafa. Ny fahombiazan'ny fandrefesana dia hanampy amin'ny famantatra ny tombontsoa avy amin'ny fandaharan'asa iray na ny paikady sy ny fiantraikany amin'ny tanjona, ary hanamafisana raha misy ny paikady mahavaha ny fiantraikany. Ny vokatra azo dia mety hanampy:
Fantaro ireo fomba mahomby - Izany dia manampy amin'ny famaritana ny asa tokony hanohanan'ny mpitantana sy hanorina. Ny fombafomba sasany dia azo ovaina sy novaina ho an'ny programa hafa na hetsika hafa mifototra amin'ny vokatra.
Fantaro ireo fanao mila fanatsarana - Ny sasany mety hila fiovana mba hanatsarana ny fahombiazan'ny programa fitantanana.
Omeo lanjany ho an'ny mpamatsy vola sy mpanolotsaina - Ny mpiasan'ny fahasalamana dia mahatsapa tsara fa ilaina ny manadihady ny fahombiazan'ny fandaharan'asa, ary ny fotoana ahafahana manatsara ny vola dia matetika miankina amin'ny fahaiza-manaon'ny mpitantana hanehoana ny fahombiazan'ny programa sy ny asa fitantanana.
Zahao ny takelaka etsy ambany raha mila fanazavana fanampiny momba ny fanaraha-maso sy ny fanombanana hanohanana ireo fanapahan-kevitra momba ny fitantanana ny fiarovana ny tontolo iainana. Loharanom-pitaovana tena tsara hahitana ny fanaraha-maso sy ny fanombanana ny lalam-piainan'ny The Nature Conservancy mandeha an-tserasera: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFomba atao. Ity fizarana ity dia manome fampahalalana momba ny fomba hanaovana fanombanana ny fanaraha-maso ny fandaniana, hampivoarana ny tanjona mazava, sy hamaritra ny famantarana, ary hanara-maso ny endriky ny endrika.
Fanaraha-maso ny fahombiazana
Famaritana ny fitantanana fitantanana
Ny fanadihadiana ireo mpandray anjara dia fomba iray hanombanana ny fahombiazan'ny fitantanana. Sary © S. Green
Fanaraha-maso dia fitaovana hiteny amin'ny mpitantana ny fomba fiasan'izy ireo ary raha toa ka tokony hanova na havaozina na haverina amin'ny tranonkala maro ny paikady. Amporisihina ny hanaovana fanaraha-maso atao amin'ny fotoana fiasan-draharaha izay efa voaomana na alaina, ary ireo singa roa ireo dia ampiharina amin'ny asa fiarovana. Noho izany, ny fanaraha-maso dia manome fampahalalana izay azo dinihina sy ampiasaina amin'ny famolavolana ny fomba fitandroana ny fiarovana.
Ny fanaraha-maso dia mety tsotra sy mora. Ohatra, ny mpitantana iray dia afaka manamarina raha toa ka mahomby ny dingana iraisana amin'ny tetikady fitantanana maharitra (ohatra, manoratra drafitra fitantanana ny faritra voaaro). Amin'ny toe-javatra hafa dia mila manao fampiasam-bola betsaka ny mpitantana mba hanamarina raha toa ka mahatratra ny vokatra maharitra amin'ny fiarovana ny ala (ohatra ny fanatsarana ny fiovan'ny karazana na ny tontolo iainana).
Ny fitsipika fototra ho an'ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso mba hitarika ny fanapahan-kevitra momba ny fitantanana ny fitantanana dia:
Manapaha hevitra amin'ny fanaraha-maso ireo antonta-kevitra mialoha ny fotoana
Ataovy tsotra izany
Mitadiava izay ilaina ho an'ny hetsika fitantanana (ary tsy mihoatra)
Hanova ny fiovaovana
Mianara ary manodina rehefa ilaina
Maro ireo teny ara-teknika ampiasain'ny literatiora izay mamaritra ny fanaraha-maso sy ny fanombanana ary matetika dia miteraka fisavorovoro ny hevitr'izany. Zava-dehibe ireo mpikambana ao amin'ny ekipa sy ny mpiara-miasa eo amin'ny tetikasa ary manana famaritana mazava sy zaraina amin'ny teny ampiasaina. Misy fehezanteny sy famaritana sasantsasany soso-kevitra etsy ambany.
Tombana misimisy - Fomba iray hanombanana ny halehiben'ny fandaharan'asa na tetikasa iray izay nahatratrarana ny vokatra nokendrena
Evaluation - Fanombanana ny tetikasa na fandaharanasa mifandraika amin'ny tanjona sy tanjona voatanisa teo aloha
Performance measure - Ny fanombanana ny lanjan'ny tetikasa iray nahatratrarana ny vokatra tadiavina
Goal - Fanambarana lehibe momba ny tanjona faran'ny tetikasa / tetikasa na paikady
tanjona - fanambarana ofisialy manazava ny vokatry ny tetikasa iray, toy ny fampihenana ny loza mitatao. Ny tanjona tsara dia mahafeno ny fepetra ahafahana mifantoka amin'ny endriny, azo refesina, voafetra ny fotoana, manokana ary azo ampiharina.
vokatra - Ny fiovana vokatry ny hetsika manokana (oh: fiovan'ny loharanon-karena, na fiainan'ny olona na mpiara-monina ao an-tanàna)
famantarana - Ny fampahalalana voafaritra tsara sy azo tsapain-kevitra mba ho hitanao raha efa tanteraka ny vokatra tiany
Ny fanombanana mahomby dia hanampy amin'ny fijerena ny vokatra sy ny vokatra azo avy amin'ny fitantanana. Ohatra:
Folo ora amin'ny fanampiana ara-teknika nomena ny filankevi-ponenana an-dranomasina momba ny famatsiam-bola maharitra Ny fampiofanana dia atao amin'ny filankevitry ny fiarahamonina Manangom-bola bebe kokoa ve ny filankevitra?
Ny mpiandraikitra ny fampiharana dia nanome fiofanana momba ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny mpanjono Fampiofanana dimy no nitarika Ny manamboninahitra dia mamorona fifandraisana amin'ny mpanjono folo eo an-toerana
Mihatsara ny fanaraha-maso ny fitsipika
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiarovana ny tontolo iainana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandaharam-pandresena azo jerena amin'ny Internet